Ingabe uyazi ukuthi kuwusizo ikhasi amawolintshi?
Zonke abadala nezingane kakhulu othanda solar izithelo elimnandi kusukela umndeni ezisawolintshi. Yebo, yebo! Uqinisile! Sikhuluma amawolintshi okumnandi kanye namanzi! Bamane bakuchazayo nathi ukunambitheka kwabo emnandi kanti iphunga emnene, ebusika eside kusihlwa ukunikeza umqondo freshness ihlobo thunzi. Namuhla mayelana izinzuzo amawolintshi bathi cishe bonke odokotela, futhi namanje zama ukuthola ukuthi lezi zithelo zuza uthando ezizinikele ezifana ngokwakho?
Orange - liyinqolobane amavithamini namaminerali
Orange kubhekwa liyinqolobane amavithamini ngaphandle ascorbic acid iqukethe ewusizo kakhulu izinto: i-folic acid, i-beta-carotene, flavonoid, ama-ejenti photochemical nabanye abaningi. Kuyinto lezi izinto bangadlala indima ekhethekile emzabalazweni kanye ezihlukahlukene izifo, kusebenze umzimba ozivikela futhi udale i-isithiyo ongabonakali izifo ezihlukahlukene malware. Amawolintshi Engenawo Umbala nezinye izithelo ezisawolintshi inendima ekhethekile ekuvimbeleni umdlavuza, ikakhulukazi ngokumelene nomdlavuza womphimbo, umlomo kanye esiswini. ucwaningo oluningana luye lwabonisa ukuthi ukusetshenziswa njalo lesi sithelo kunciphisa ingozi yesifo by 40-50%.
Ikhasi amawolintshi kuyasiza cholesterol aphezulu
I-World Health Organization futhi ukholelwa ukuthi ezisawolintshi kungase kube usizo ekuvimbeleni isifo senhliziyo kanye nesifo sohlangothi. Ngokusho idatha yesayensi, omunye orange ngosuku kunciphisa ingozi yokushaywa unhlangothi ngokuphindwe 20%. Akufanele ulahle amakhasi - amawolintshi ikhasi kunciphisa cholesterol embi egazini. Ingqikithi efanayo iyatholakala ku fresh-isibambo orange juice, kodwa kukhona kungcono kakhulu ukubuyeka. Ikhasi amawolintshi - kungcono ithuluzi elikahle kakhulu nokugcina ajabule, ngakho badinga ukufunda ukuyisebenzisa kahle ekhaya. Ungakwazi grate it on a grater encane futhi ezisetshenziselwa ukupheka nososo, isobho, salads zemifino zezinkambi.
elikhuhluziwe Orange. Sizo ona?
Orange libhekisela yokubaluleka lezo zinhlobo zezindawo izitshalo ezingavamile lapho zonke izingxenye ziwusizo kubantu. Bona, njengazo zonke ezisawolintshi, iqukethe ewusizo citric acid, okuyinto kuvimbela ukubonakala orange izithelo nitrate kanye nitrites. Ngakho-ke, akekho orange, noma ibala lakhe akuyona usongo empilweni yomuntu. ikhasi Orange isetshenziswa ukwenza isithako nomuthi, okuyinto aqede ubuhlungu zinsuku zokugcina ezibucayi. Ngaphezu kwalokho, lezi zithelo kuhoxiswe kahle kusukela ubuthi emzimbeni futhi kuchitha. Abantu abathanda futhi ngokuvamile ukudla amawolintshi, awanandaba nge ibhalansi amanzi-usawoti kanye, ngenxa yalokho, ube ukuvuvukala kangako noma abangafundile nhlobo.
Indlela ewusizo ngodonga amawolintshi?
Ngisho ukwahlukanisa phakathi orange tincetu ifa umsoco, ziqukethe pectin (fibre encibilikayo) elikhona apula, amapulamusi kanye currants abomvu. Abaningi agent okuzuzisayo yakhiwa ikhasi lemon. Ukusetshenziswa pectin kwafakazelani kudala, baqaphela ukuthi kunciphisa izinga cholesterol elimazayo. Ngodonga zinanesilinganiso enkulu bioflavonoids, okuyinto zibhekwa Antioxidants engcono. Ukuze bazizwa amandla umsoco amawolintshi, ngangokunokwenzeka udinga ukudla wonke izithelo, nge elikhuhluziwe ngodonga.
Ubani ongafaka ukulimaza amawolintshi?
Ukudla ezisawolintshi contraindicated kokungabekezelelani ngabanye, kanye in iziyaluyalu okukhulu pheshana emathunjini. Pure orange juice kungase zibulale koqweqwe lwawo ngezinyo, ngakho ngemva kokuphuza orange juice noma idliwe Kunconywa ukuba Hlambulula umlomo wakho noma ukuxubha amazinyo akho. Kwezinye izimo, ama-orentji edliwayo eziningi ezinengqondo futhi ngesikhathi esifanayo babe njalo isesimweni esihle futhi ukahle kakhulu!
Isipinashi. izakhiwo awusizo ulethisi
Water Ukudla - indlela elula ukunciphisa umzimba
Kefir "ezimthende" Ukudla: ukubuyekezwa kanye imiphumela isisindo ukulahlekelwa, ikakhulukazi isicelo yayo, ukudla
Udali, ukusebenzisa wezokudla
Yini Amavithamini eziqukethwe izaqathe kanye isibindi futhi iziphi izinzuzo zabo
Ukuxilongwa sokuzibulala e intsha esikhulakhulile: Ukuhlola. Ukuvimbela ukuzibulala ukuziphatha intsha esikoleni
Borovaya kwesibeletho: izakhiwo zokwelapha kanye contraindications, yokusetshenziswa
Design of kwamanzi nokuthuthwa kwendle. imithetho design
Pimrada Ihhotela (Phuket, Patong Beach): ngezibuyekezo nezithombe zezivakashi
Ngikholwa - Angikholwa, noma kungani sidinga inkolo?
Natalya Batova - engavamile futhi emuhle
Yini kuyize, futhi yindlela eyingozi kangangani ukuthoma ukukhamba abantu
Nge-ovulation: Konke Okubalulekile Ukwazi
Isimiso Anthropic: kwenkululeko